Skylines (2020) – Gold Channel Movies
Video Sources 4359 Views Report Error
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Skylines ဆိုတဲ့ သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ဒါရိုက်တာ Liam O’Donnell ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့လာရောက်ကြတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေကို အာကာသထဲထိလိုက်ပြီး တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းကြတာကို ပီပီပြင်ပြင်ရိုက်ကူးပုံဖော်ပြသထားတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေပြီး အရမ်းကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ကမ္ဘာမြေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေက လူသားတွေကို ရောဂါပိုးတစ်ခုနဲ့ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ဒီဂြိုဟ်သားတွေရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ရတ်ဖို့ဒ်က အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဂြိုဟ်သားတွေဆီမှာရှိတဲ့ အမန်ဒါရေယာဉ်ကဘဲ ဒီအခြေအနေအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် အာကာသထဲကိုသွားဖို့စီစဉ်ကြတယ်။
အမန်ဒါရေယာဉ်ကို မောင်းနှင်နိုင်ဖို့စွမ်းအားက ရို့စ်ကိုလီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဘဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့အာကာသယာဉ်ပျံနဲ့ ဂြိုဟ်ပေါ်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမန်ဒါရေယာဉ်ကိုရဖို့ အာကာသထဲမှာ သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေတုန်းမှာဘဲ ကမ္ဘာမြေပေါ် မှာလည်း ဂြိုဟ်သားတွေက လန်ဒန်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ အမန်ဒါရေယာဉ်ကို ရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရတ်ဖို့ဒ်ရဲ့သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ရိုစ့်ကိုလီဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ၊ အမန်ဒါရေယာဉ်ပေါ်ကို သူရောက်အောင်သွားနိုင်ပါ့မလား၊ ကမ္ဘာမြေမှာသောင်းကျန်းနေတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေကိုရော ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းကြမလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်ရှုခံစားရင်း အာကာသထဲကိုအလည်သွားလိုက်ရအောင်လား ပရိသတ်ကြီးရေ….
Genres – Action, Adventure, Sci-fi
IMDb Rating 4.7 2,440 votes
JerrodSeptember 5, 2021Reply
Also visit my web page … but scoliosis surgery
AustinSeptember 5, 2021Reply
My page – asmr in (http://j.mp/2WShZQd)
JamieSeptember 3, 2021Reply
kind of info written in suchaperfect means? I haveachallenge that I’m just now working
Check out my web-site why asmr (http://bit.ly/38vuS56)
AmparoSeptember 3, 2021Reply
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I book-marked it.
Feel free to visit my web blog … where scoliosis surgery
EveSeptember 1, 2021Reply
Feel free to visit my web-site :: asmr off
CandaceAugust 30, 2021Reply
Look into my site :: quest bars was (bit.ly)
StephanAugust 28, 2021Reply
My page web hosting when